Santiago Solari oo ka hadlay Guusha Silica ay ka gaareen kooxda SD Huesca – Gool FM
Santiago Solari oo ka hadlay Guusha Silica ay ka gaareen kooxda SD Huesca
(La Liga) 09 Dis 2018. Tababaraha kooxda Real Madrid Santiago Solari ayaa xaqiijiyay in in xaaladaha jawiga kulankii Huesca ay ahayd mid aad u adag.
Macalinka reer Argantina ayaa dhinaca kale sheegay in ciyaartoyda kooxda martida loo ahaan ee Huesca ay sameeyeen cadaadis xoogan inta kulanka uu socday, taasoo ka caawisay inay adeegsadaan fikradahooda.
Kooxda Real Madrid ayaa u suuragashay inay guul silic ah ee 1-0 ah ku gaarto kulankooda 15-aad ee horyaalka La Liga ay ku booqdeen kooxda Huesca, taasoo ka caawisay Los Blancos inay fadhiisato booska 4-aad ee dhanka kala sareynta.
Kulanka kadib ayuu macalinka kooxda Real Madrid Santiago Solari la hadlay saxaafada wuxuuna yiri:
“Waan guuleysanay, waxaana helnay saddexda dhibcood, waana waxa ugu muhiimsan”.
“Gareth Bale wuxuu dhaliyay gool cajiib ah, balse maanta ma aanan ciyaarin kulan sax ah, balse waxaan heysanaa waqti aan hormar ku sameyn karno, si aan u soo bandhino qaab ciyaareed fiican”.
“Ciyaartoydeena waxay muujiyeen inay leeyihiin shakhsiyad cajiib ah oo ay ku ciyaari karaan marka ay xaalada sidaan oo kale tahay, kooxda Huesca ayaa ciyaarta ku soo gashay cadaadis xoogan, si cad ayayna u fiicnaayeen”.
“Qeybtii hore inaga ayaa fiicneen, balse qeybta labaad waxaa fiicnaayeen kooxda martida loo ahaa, kooxda Huesca waxay u ciyaareysay si geesinimo ah, waan jeclahay u dagaalamida horyaalnimada, wax walbana way dhici karaan”.
"Waa wax Qariib ah.".- Hazard oo ka hadlay in Xalay laga ciyaarsiiyay Booskii uu ka ciyaarsiin jiray Antonio Conte